Khabiirka Xoogsatada ah wuxuu sharaxaa Qalabyada Kumbuyuutarka ee ugu sareeya
Boggaga internetka qaarkood, waa lagama maarmaan in la baabiiyo qalabyada fiirinta webka . Waxay ka caawiyaan macluumaadka bogga intarnetka ee laga soo qaado goobta oo ku kaydi meel fog ama wadajir adag. Dadku waxay necbaan fursadda caanka ah ee kaydinta xogta bogga shabakadda iyadoo la adeegsanaayo browser - certificado ssl barato. Si kastaba ha noqotee, bogagga qaarkood waxay leeyihiin bogag badan. Qofku wuxuu awood u yeelan karaa inuu isticmaalo qalabka saarista shabakadda si uu u kaydiyo bogag badan oo goos ah. Qalabka intooda badani waxay bixiyaan adeegyo otomaati ah sida habeynta jadwalka joogtada ah. Qalabkani wuxuu ku shaqeeyaa sida boogbiyuutarada caadiga ah, marka laga reebo in ay yihiin mashiinnada webka fudud oo booqanaya bogagga internetka oo ururiya xogta muhiimka ah.
Maqaalkan SEO, qaar ka mid ah qalabka wax laga soo saaro ee ugu saameyn badan ayaa jira:
Tani waa qalab ka fiirsashada shabakada websaydh kaas oo soo dejisan kara macluumaadka bogga. Isticmaalayaasha ayaa leh faa'iido u ah isticmaalka sahlan ee isticmaala kaas oo la yimaada waxyaabo badan oo kala duwan. Dadka aan lahayn ama barnaamijka aqoonta yar yar waxay u isticmaali karaan Octoparse si ay u suurtogeliyaan soo saarista xogta URL ah.
Waraaqaha shabakada ayaa laga yaabaa inay rabaan inay xog ka helaan wixii qaansheegad, rasiidh iyo emails. Dhammaan kiisaskaas, Hubdoc waxay awoodi karaan inay gurguuraan oo ay ururiyaan macluumaadkaan si ay u bartaan bartilmaameedka. Laga soo bilaabo halkan, qalabkani wuxuu awood u yeelan karaa inuu xogta ku kaydiyo qaab habaysan oo loogu talagalay tixraaca mustaqbalka.
Isticmaalayaasha Windows, WinAutomation waxay u sahlaysaa dadka in ay horumariyaan content boggooda internetka.waxay u suurogelisaa isticmaalayaasha Windows inay helaan qalab otomaatiik ah oo awood u leh in ay badbaadiyaan iyo sidoo kale abuuraan taxane qaabaysan
Xogta Caafimaadka Daabacaadda
Marka la tixgelinayo aaladaha laga saaro bogga isbitaallada, Macluumaadka Caafimaadka Loo adeegsado waxay ka caawisaa dadka isticmaala xogta bogagga shabakadaha caafimaadka. Cisbitaalada iyo ambalaaska iyo adeega dhakhtarka. Cunnayaasha isticmaalaya adeegyada ETL, Macluumaadka Caafimaadka Dhiirigelinta waxay ka caawisaa automaatikada xog uruurinta ururrada caafimaadka ee gaarka ah ee loogu talagalay isticmaalka nidaamyadooda
Xogta ku saabsan macluumaadka shabakada ee khariidada ah ee loo adeegsado macaamiisha, kuwaas oo ku xiran xogta macluumaadka boggaga internetka iyo kaydinta macluumaadka bogga Diggernaut wuxuu leeyahay xiriir fudud oo fudud iyo sidoo kale fududeynta fudud iyo dhibcaha fudud
Isticmaalayaasha kuwaas oo doonaya in ay soo saaraan wax iibsi, waxaad heli kartaa xog sax ah adoo isticmaalaya qalabka sida Salestools.io. Qalabkani wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah in la helo xogta websiteka tartanka. Waxaa intaa dheer, mid ayaa awoodi kara inuu dhexgalo qorshaha suuq-geynta tartanka ee tartanka.
Baahida qaar ka mid ah baahida, API-yadu waxay noqon kartaa mid aan isku mid ahayn. Xaaladahaan, xogta u dhexaysa waqtiga dhabta ah ama shuruudaha dejinta waxaa suuragal ah in la suurtageliyo iyadoo la isticmaalayo qalabka isdhaafsiga macluumaadka.
Ganacsiyada waxay isticmaali karaan Datahut si ay ugu diyaar garoobaan isticmaalka waxyaabaha ganacsiga. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay doonayaan inay sameeyaan falanqayn ganacsi gaar ah. Datahut waa qalab wax laga soo saaro oo ka dhigaysa kuwa isticmaala macluumaadka bogga ee faaruus. Dadku samaynta bilawga ganacsi waxay ka faa'iideysan karaan barnaamijkan.